Obedaya 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lingala Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Ossetian Otetela Pangasinan Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Thai Tigrinya Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uzbek Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Jenesis Ọpụpụ Levitikọs Ọnụ Ọgụgụ Diuterọnọmi Jọshụa Ndị Ikpe Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ndị Eze 2 Ndị Eze 1 Ihe E Mere 2 Ihe E Mere Ezra Nehemaya Esta Job Abụ Ọma Ilu Ekliziastis Abụ Sọlọmọn Aịzaya Jeremaya Abụ Ákwá Ezikiel Daniel Hosia Joel Emọs Obedaya Jona Maịka Nehọm Habakọk Zefanaya Hagaị Zekaraya Malakaị Matiu Mak Luk Jọn Ọrụ Ndịozi Ndị Rom 1 Ndị Kọrịnt 2 Ndị Kọrịnt Ndị Galeshia Ndị Efesọs Ndị Filipaị Ndị Kọlọsị 1 Ndị Tesalonaịka 2 NdịTesalonaịka 1 Timoti 2 Timoti Taịtọs Faịlimọn Ndị Hibru Jems 1 Pita 2 Pita 1 Jọn 2 Jọn 3 Jọn Jud Mkpughe 1
1 Ọhụụ Obedaya: Nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru banyere Idọm:+ “E nwere ozi anyị nụrụ nke si n’ebe Jehova nọ, e nwekwara onye ozi e zigara n’etiti mba dị iche iche, ‘Bilienụ, ka anyị biliekwa buso ya agha.’”+ 2 “Lee! Emewo m ka ị dị ntakịrị n’etiti mba+ dị iche iche. A na-eleda gị anya nke ukwuu.+ 3 Ọ bụ mpako+ nke obi gị duhiere gị, gị onye bi n’ebe mgbaba nke nkume+ dị elu, n’ebe dị elu o bi na ya, na-asị n’obi ya, ‘Ònye ga-akwatu m n’ala?’ 4 Ọ bụrụ na i mee ka ebe ị nọ dị elu dị ka nke ugo, ma ọ bụ, ọ bụrụ n’ebe kpakpando dị ka i debere akwụ́ gị, m ga-esi n’ebe ahụ kwatuo gị,”+ ka Jehova kwuru. 5 “Ọ bụrụ na ọ bụ ndị ohi batara+ n’ime gị, ọ bụrụ na ndị na-akwakọrọ ihe batara n’abalị, olee otú a gaara ebibiru gị? Ọ́ bụghị otú ha chọrọ ka ha ga-ezuru ihe? Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ bụ ndị na-aghọ mkpụrụ vaịn batara n’ime gị, ọ̀ bụ na ha agaghị aghọfọ mkpụrụ?+ 6 Lee ókè e nyocharuworo+ ụmụ Isọ! Lee ka a chọpụtaworo akụ̀ ya ndị e zoro ezo! 7 Ha achụpụwo gị ruo n’ókè nke ala ha. Ndị niile gị na ha gbara ndụ aghọgbuwo+ gị. Ndị gị na ha dị n’udo emeriwo gị.+ Ndị gị na ha na-erikọ nri ga-eji ụgbụ siere gị ọnyà dị ka onye na-enweghị nghọta.+ 8 Ọ́ gaghị abụ n’ụbọchị ahụ?” ka Jehova kwuru. “M ga-ebibi ndị maara ihe n’Idọm,+ laakwa nghọta n’iyi n’ógbè Isọ bụ́ ugwu ugwu. 9 Ụjọ+ ga-ejidekwa ndị dike gị, gị Timan,+ n’ihi na a ga-ebipụ+ onye nke ọ bụla n’ógbè Isọ bụ́ ugwu ugwu, site n’igbu ya egbu.+ 10 N’ihi imeso nwanne gị bụ́ Jekọb+ ihe ike, ihere+ ga-emegbu gị, a ga-ebipụkwa gị ruo mgbe ebighị ebi.+ 11 N’ụbọchị i guzopụrụ iche, n’ụbọchị ndị ala ọzọ dọọrọ ndị agha ya n’agha+ nakwa mgbe ndị mba ọzọ banyere n’ọnụ ụzọ ámá+ ya, ha efeekwa nza+ maka Jeruselem, gị onwe gị kwa dị ka otu n’ime ha. 12 “I kwesịghị ịnọ na-ekiri ihe mere n’ụbọchị nwanne+ gị, ya bụ, n’ụbọchị ihe ọjọọ dakwasịrị ya; i kwesịghịkwa ịṅụrị ọṅụ n’ihe mere ụmụ Juda n’ụbọchị a lara ha n’iyi;+ i kwesịghịkwa ịnọ na-etu ọnụ n’ụbọchị ahụhụ ha. 13 I kwesịghị ịbata n’ọnụ ụzọ ámá nke ndị m n’ụbọchị ọdachi+ dakwasịrị ha. Gị onwe gị ekwesịghị ịnọ na-ekiri nhụjuanya ya n’ụbọchị ọdachi dakwasịrị ya; i kwesịghịkwa isetịpụ aka metụ akụ̀ ya n’ụbọchị ọdachi+ dakwasịrị ya. 14 I kwesịghịkwa iguzo n’ebe ụzọ nwere ngalaba, iji gbuo ndị ya gbapụrụ agbapụ;+ i kwesịghịkwa ịkpọrọ ndị ya lanahụrụnụ nyefee n’aka ndị iro ha n’ụbọchị ahụhụ.+ 15 N’ihi na ụbọchị+ Jehova nke ga-abịakwasị mba niile dị nso. Otú i si mee ya ka a ga-eme gị.+ Ụdị mmeso i mesoro ya ga-alọghachi n’isi gị.+ 16 N’ihi na otú unu si ṅụọ ihe ọṅụṅụ n’ugwu nsọ m ka mba niile ga na-aṅụ+ mgbe niile. Ha ga-aṅụ ihe ọṅụṅụ ma loda ya wee dịrị ka ndị na-adịtụbeghị adị. 17 “Ọ bụkwa n’Ugwu Zayọn ka ndị gbapụrụ agbapụ+ ga-anọ, ọ ga-aghọkwa ihe dị nsọ;+ ụlọ Jekọb ga-enwetakwa ihe dịịrị ha inweta.+ 18 Ụlọ Jekọb ga-aghọ ọkụ, ụlọ Josef aghọọkwa ire ọkụ,+ ụlọ Isọ ga-adịkwa ka ahịhịa ọka;+ ha ga-esunye ha ọkụ wee laa ha n’iyi. A gaghịkwa enwe onye si n’ụlọ Isọ+ ga-alanahụnụ; n’ihi na Jehova ekwuwo ya. 19 Ha ga-enwetakwa Negeb, ọbụna ógbè Isọ+ bụ́ ugwu ugwu, nwetakwa Shefila na ala ndị Filistia.+ Ha ga-enweta ala Ifrem,+ nwetakwa ala Sameria;+ Benjamin ga-enwetakwa Gilied.+ 20 Ma ndị a dọọrọ n’agha n’ékpè a,+ ihe ndị Kenan+ nwe ruo Zarefat+ ga-aghọ nke ụmụ Izrel. Ndị a dọọrọ n’agha na Jeruselem, bụ́ ndị nọ na Sefarad, ga-enweta obodo ndị dị na Negeb.+ 21 “Ndị nzọpụta+ ga-agbagokwa n’Ugwu Zayọn,+ iji kpee ógbè Isọ+ bụ́ ugwu ugwu ikpe; ọbụbụeze ga-abụkwa nke Jehova.”+